လူလည်းတထွေ ရေလည်းတခြားကို ဝေဖန်ခံစားခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » လူလည်းတထွေ ရေလည်းတခြားကို ဝေဖန်ခံစားခြင်း
လူလည်းတထွေ ရေလည်းတခြားကို ဝေဖန်ခံစားခြင်း
Posted by alinsett on Apr 11, 2016 in Arts & Humanities, Creative Writing, Critic, Drama, Essays.., History | 21 comments
ဘာသာပြန် စာရေးဆရာမ ဝင့်ပြုံးမြင့်၏ လက်ရာ ”လူလည်းတထွေ ရေလည်းတခြား”စာအုပ်ကို ခံစားခြင်း
ဝတ္ထုစာအုပ်လို့ အမည်တပ်ထားတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ဖတ်ရင်း ‘ရသ’ဆိုတာကြီးကို ခံစားမိဖို့ မေ့သွားတာမျိုး သင်တို့ ဖြစ်ဖူးပါသလား။
ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်မိသော စာအုပ်တစ်အုပ်ကတော့ ကျွမ်းကျင်သောစာရေးဆရာတစ်ယောက်ယောက်၏ အတတ်ပညာ အနုပညာဖြင့် ဖန်တီးထားသည့် ဝတ္ထုတစ်ပုဒ် မဟုတ်ပါဘဲ
တကယ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသမျှ အဖြစ်မှန်ကို ကြုံတွေ့သူကိုယ်တိုင်က မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် စာအုပ်တစ်အုပ် ဖြစ်နေသောအခါ. . .
ကျွန်တော်သည် ‘ရသ’ ခံစားဖို့ထက်
အဲ့သည် တကယ့်အဖြစ်အပျက်ထဲကို စိတ်အာရုံက စီးမျောပါဝင်သွားပြီး စာရေးသူကြုံခဲ့ရသမျှကို ဘေးကနေ လိုက်ပါကြည့်ရှုနေရသူလို ဖြစ်သွားသည်။
ကျွန်တော့် အတွေးစဉ်ကတော့ အမျှင်မပြတ်. . .
စာရေးသူ ကြုံခဲ့ရသမျှ သက်စွန့်ဆံဖျားအတွေ့အကြုံကို ပြန်မြင်ယောင်နေရင်း. . . ကိုယ့်နှမသားချင်းများသာ ဒါမျိုးအဖြစ်အပျက်ကို ကြုံခဲ့လျှင်. . . ဆိုသည့်အတွေးဖြင့်
စာအုပ်ကိုကိုင်ရင်းလျက်က အတွေးစိတ်တို့ တဝဲလည်လည်. . .
ဘာသာပြန်ဆိုသူ ဆရာမ’ဝင့်ပြုံးမြင့်’၏ ဘာသာပြန်ဆိုပေးမှုကြောင့် သင်ခန်းစာယူဖွယ်. . . သနားဂရုဏာသက်ဖွယ်. . .
ရင်တုန်လှိုက်မောဖွယ်. . .
ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်က မြန်မာစာပေလောကထဲ ဘွားခနဲ ဝင်ရောက်လာပါသည်။
”လူလည်းတထွေ ရေလည်းတခြား”ဟု အမည်ပေးထားသော်လည်း မူရင်းစာအုပ်အမည်မှာ ”NOT WITHOUT MY DAUGHTER” ဖြစ်ပါသည်။
ဒါ့အပြင် မူရင်းစာရေးသူ ”BETTY MAHMOODY”သည် နာမည်ကျော် စာရေးဆရာတစ်ယောက် မဟုတ်သော်လည်း ဤအဖြစ်မှန်စာအုပ်ကို ရေးသားထုတ်ဝေသောအခါ အုပ်ရေ သန်းပေါင်းများစွာ ရောင်းချရသည်အထိ အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ဤစာအုပ်ထဲမှ အဖြစ်ကိုပင် ရုပ်ရှင်အဖြစ် အသက်သွင်းတော့လည်း ဟိုးလေးတကျော်ကျော် အောင်မြင်ခဲ့သည်။
”ဆရာမဝင့်ပြုံးမြင့်”၏ လက်ရာနှင့် အဲ့သည်စာအုပ်ကို ကျွန်တော်တို့ ဖတ်ရှုပြီး သင်ခန်းစာယူနိုင်ပြီ။
ကြုံတွေ့ခဲ့ရသူ ”အမေရိကန်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့် ငါးနှစ်အရွယ်သမီးငယ်ကလေးတစ်ဦးတို့၏ သွေးပျက်ခဲ့ရာ ငရဲခန်းအတွေ့အကြုံ” ဖြစ်ပါသည်။
ထို့အပြင် ”မစဉ်းစားမဆင်ခြင်ဘဲ အိမ်ထောင်ဘက်ကို ဟင်းရွက် ကန်စွန်းရွက် ခူးသလို ဆွတ်ယူမိသော အမျိုးသမီးတစ်ယောက်၏ မဟာအမှား” ။
”ဆိုးရွားပက်စက်သည့် မာယာထောင်ချောက်ထဲ တွင်းဆုံးထိ ကျခဲ့ရပြီးမှ နောင်တများစွာ၊ နာကျင်မှုများစွာ၊ သွေးရူးသွေးတန်း မျှော်လင့်ချက် များစွာတို့ဖြင့် လွတ်မြောက်ဖို့ ကြိုးစားရသည့် သမီးတစ်ကောင်ပိုက်လျက်က ကျားနာမတစ်ကောင်လို ကျားကုတ်ကျားခဲ ကြိုးစားခဲ့ရသည့် သင်ခန်းစာ”လည်း ဖြစ်ပါသည်။
အမေရိကနိုင်ငံသူ ‘BETTY MOHMOODY’ကို (အမေရိကနိုင်ငံသားအဖြစ် ခံယူတော့မလိုလို ဟန်ပြနေခဲ့သော)’မာမွတ်ဒီ’ဆိုသူက ဇနီးမယားအဖြစ် ရယူခဲ့ပြီး သမီးငယ်လေး ‘မာထော့ဘ်’ ငါးနှစ်ပြည့်လုနီးပါးအချိန်ကျမှ
မာမွတ်ဒီ၏ ‘မွတ်’ဆွေမျိုးမိဘများရှိရာ ‘မွတ်တိုင်းပြည်- အီရန်’သို့ ၂ပတ်တာမျှ အလည်အပတ်သွားမည်ဟု ခေါ်ရာက စပါသည်။
လင်ယောက်ျားဖြစ်သူက ”အီရန်ထဲမှာ အပြီးခေါ်မထားပါဘူး”ဆိုသည့် ကတိကို ကိုရမ်ကျမ်း ကိုင်ပြီး ပေးခဲ့လို့ ယုံစားပြီး လိုက်လာမိသည့် အမေရိကန်သားအမိ။
ဆွေပြမျိုးပြ ခဏခရီးစဉ်ဟုသာ ထင်မှတ်ထားသော်လည်း တကယ့်တကယ်မှာတော့ ထိုခရီးစဉ်သည် ကြိုတင်ကြံစည်ပြီး ပြန်မလွှတ်တော့ဘူး ဆိုသည့်
”အတုတ်အနှောင် မွတ်ဇာတ်သွင်း ခရီးစဉ်”သာ ဖြစ်နေမှန်း နှောင်းခါမှ သိသွားရသည်။
US မှာ ကျန်ရစ်ခဲ့သမျှ ထိုသားအမိ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု စည်းစိမ်ဥစ္စာများကိုပါ အီရန်ထဲထိ ရောက်အောင် နည်းမျိုးစုံဖြင့် အကျပ်ကိုင် ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည့်အတွက် တိုင်းတပါးထဲအထိ ခေါ်ငင်ပြီးမှ ဓါးပြအတိုက်ခံရသည့် ခရီးစဉ်လည်း ဖြစ်ခဲ့သည်။
ထို့အပြင် အမေရိကန်သူ ဘတ်တီ့ခမျာ US မှာ ကျန်ရစ်ခဲ့သည့် ဖခင်အိုကြီး ကင်ဆာရောဂါဖြင့် ဆုံးပါးတော့မည့် သတင်းကို ကြားပါလျက်နှင့် လူသားချင်း စာနာမှုကင်းမဲ့စွာ ချုပ်နှောင် နှိပ်စက်ခံနေရသည့်အဖြစ်သည် ရင်ကွဲနာ ကျမတတ် သွေးရူးသွေးတန်း။
လူ့အခွင့်အရေးကို အပြည့်နီးပါး ရနေသည့် အမေရိကန်သူ သားအမိ – လူ့အခွင့်အရေးမှန်သမျှ ရုတ်သိမ်းခံရပြီး လင်ယောကျာ်းဖြစ်သူနှင့် ဆွေမျိုးတသိုက်က သေဆိုသေ ရှင်ဆိုရှင်ဘဝကို နေ့ချင်းညချင်းရောက်သွားသည့်အပြင်
အစွန်းရောက် အစ္စလာမ်ဘာသာရေး မှိုင်းတွေ ဇွတ်အတင်း အတိုက်ခံရ၊ (အီရန်သား မာမွတ်ဒီကို လက်ထပ်မိပြီး အီရန်မြေထဲ ဝင်လာမိသည်နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံသူ အဖြစ်မှ အလိုအလျောက် ပျောက်ဆုံးသွားပြီး အီရန်သူ ဖြစ်သွားရသည်အထိ) ရူးကြောင်ကြောင်နိုင်သော ဘာသာရေးလွှမ်းမိုးသည့် ဥပဒေများနှင့် အတုတ်နှောင် ခံလိုက်ရလေသည်။
အိမ်တွင်းမှာနေရင်းနဲ့တောင် လွတ်လပ်မှုဆုံးရှုံးနေရသည့်အဖြစ်ကို (အမေရိကန်သူပီပီ) အပြင်းအထန် ကန့်ကွက်ခဲ့ပြီး US ပြန်ခွင့်ရဖို့ကို နည်းလမ်းရှာနေရာမှ
အိမ်ထဲက အိမ်ပြင် ထွက်ခွင့်မရသည့်အပြင် ချစ်သမီးနှင့် ခွဲထားခံရပြီး တိုက်ပိတ်သလို အကျဉ်းချခံရ၊
စိတ်ပျက်စရာ နှိပ်စက်ကလူပြုနေသော မွတ်အသိုင်းအဝိုင်းကြားမှာ
အမေရိကားမှ လာသည့်သားအမိမို့ အမဲဖျက်ချင်စိတ်တွေနဲ့ ဝိုင်းဝန်းချောက်ချခံရ။
အဲသည် အစွန်းရောက်ဘာသာရေး-ဝါဒမှိုင်းရှူ တယူသန်တွေကြားမှာ အလိုက်အထိုက်နေရင်းကနေ အိမ်ထဲက အိမ်ပြင် ထွက်ခွင့်ရအောင် အချိုသတ်ရသည့် ဘတ်တီ၊
ချောက်ချတတ်သည့် မျက်လုံးပေါင်းများစွာ စောင့်ကြည့်နေသည့်ကြားမှ အချိန်တစ်မိနစ်ကအစ စွန့်စားအသုံးချပြီး ဆွစ်ဇာလန်သံရုံးတွင်းမှ
US Embassy ရုံးခွဲကလေးထဲ ရောက်အောင်သွားပြီး US မှာ ကျန်ရစ်ခဲ့သည့် ဆွေမျိုးများ၏ အကူအညီ ရလိုရငြား ကြိုးပမ်းခဲ့သော်လည်း ကြံကြီးစည်ရာ အစွန်းရောက်ဥပဒေများဖြင့် ကာဆီးထားသော အီရန်ထဲမှ ထိုသားအမိကို သံခင်းတမန်ခင်းနည်းများဖြင့် ကယ်တင်ဖို့ရာ မည်သူမျှ မတတ်စွမ်းသာ။
ဟောဒီ ‘မွတ်တိုင်းပြည်’ထဲကနေ လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် ထွက်ခွါသွားနိုင်ဖို့ရာ နည်းလမ်းမှာ များများစားစား မရှိ။
နယ်စပ်ကို ရုပ်ဖျက်ပြီးထွက်၊ နယ်စပ်မှတဆင့် တဖက်နိုင်ငံထဲ ခိုးဝင်ပြီး US သံရုံးအကူအညီ သွားယူရုံသာ ရှိတော့သည်။ (ယခု သူမ ပိတ်မိနေသောနိုင်ငံထဲတွင် US သံရုံးကို အစွန်းရောက်တို့ မီးရှို့ပစ်လိုက်သောကြောင့် မရှိတော့)
သို့သော် နယ်စပ်မှတဆင့် ပို့ဆောင်ပေးမည်ဆိုသော လူမှောင်ခို သယ်ဆောင်ရေးဂိုဏ်းများမှာ ကြမ်းတမ်းစုတ်ပဲ့လှသော ခရီးစဉ်များကြားမှာ လှုပ်ရှားရသည့်အပြင် အများစုမှာ တဖက်နိုင်ငံမရောက်မှီမှာပင် မုဒိမ်းကျင့် သတ်ဖြတ်ခံလိုက်ရပြီး အလောင်းပျောက်သွားသည်ဆိုသည့်
ဒုက္ခသည် သတင်းများက ပျံ့ပျံ့သင်းလျက်။
အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ အသက်ရှင်လျက် လွတ်မြောက်သွားဖို့ မျှော်လင့်ချက်ဆိုသည်မှာ သေးမျှင်ပါးလျလှသော်လည်း ထိုမျှော်လင့်ချက် ကောက်ရိုးမျှင်ကလေးကိုပင် အားကိုးတကြီးဆုပ်ကိုင်ပြီး အသက်ကို ဖက်နှင့်ထုပ်ကာ စွန့်စားပြေးလွှားရရှာသည့် သားအမိ။
ထိုသားအမိ၏ လွတ်မြောက်မှုသည် ဖတ်ရှုခံစားနေမိသူတို့ရဲ့ လွတ်မြောက်မှုဟုပင် ထင်မှတ်မိသွားသည်အထိ ထိုအဖြစ်အပျက်က သွေးကျဲချင်စရာ . . .
ဤစာအုပ် ဖတ်ပြီးသောအခါ လူတစ်ယောက်အတွက် အိမ်ထောင်ဖက် ရွေးချယ်ခြင်းကိစ္စ ဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှ အရေးကြီးသလဲဆိုသည်ကို မစဉ်းစားမိပဲ မနေနိုင်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ထို့အပြင် ဘဝမှာ အကျဉ်းအကျပ်ထဲ ပိတ်လှောင်နှိပ်စက်ခံရသည့် အခြေအနေမှာပင် ကောက်ရိုးတမျှင်ပြီးတမျှင် ရှာနေတတ်သည့် မျှော်လင့်ချက်အမြင်၊
တဝုန်းဝုန်းတဒိုင်ဒိုင်း အကြိမ်ကြိမ် လဲပြိုကျနေသည့်ကြားမှ ကိုယ်လိုချင်သည့် လွတ်မြောက်မှုကို စွန့်စားပြီး မရအရ ဖန်တီးယူတတ်သည့် ဇွဲ သတ္တိတို့ကို အံသြတကြီး အတုယူမိလိမ့်မည်။
ဒါ့အပြင်. . .
”ဒီစာအုပ်ကို ခင်ဗျားတို့ရဲ့ သား သမီး တူ တူမတွေကို ပေးဖတ်ပါ”
”သင်ခန်းစာ ယူစရာ ဖြစ်ရပ်မှန်မို့ ဖတ်သင့်သူတွေ ဖတ်မိအောင် တိုက်တွန်းပေးကြပါ” ဆိုပြီး
ဤစာအုပ်အား ယခု ကျွန်တော့်လိုပင်
စာချစ်သူများအား ချစ်ခင်လေးစားလျက်. . .
ဒုက္ခပဲ.. လူပျိုကြီးဖတ်ပြီး.. အပျိုကြီးတွေတိုးအောင်လုပ်မယ့်ကိန်း…
သပိတ်သပိတ်.. လွှတ်ပစ်.. လွှတ်ပစ်…။
စားခွက်.. စားခွက်.. ဖျောက်ဖျောက်…။
USရောက် မြန်မာ-အမေရိကန် အပျိုကြီး လူပျိုကြီးတွေ ဖတ်မိအောင်
သူကြီး သတင်းစာမှာ အခန်းဆက် ထည့်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်
ဟုတ်တယ် သဂျီး။ သဂျီးကို အပူကပ်ရမယ်။ စာအုပ်အညွှန်း သဂျီးရဲ့ စူပါသတင်းစာမှာ ထည့်ပေးပါ။
စာအုပ်က အပေါ်ယံကြောကြည့်တော့ အိမ်ထောင်ရေးအတွေးမမှားဖို့။
ခပ်နက်နက်လေး ကြည့်ရင်တော့ မွတ် နဲ့ ဗုဒ်ဓဘာသာ ဘာမှ မကွာလှတာကိုတွေ့မယ်။ ဟို ဘုရား တန်ခိုးကြီး၊ ဒီကျောက်တုံး အစွမ်းရှိ၊ အဲဒါမျိုးတွေ အယုံကြီးယုံကြတာ။ ပုတီး တချောက်ချောက် စိပ်ကြတာ။ အီရန်က မြန်မာပြည်အတိုင်းပဲ။
ဒီ့ထက် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းလေး ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ဘရိန်းဝပ်ကိစ္စ ရယ်၊ အာဏာရှင်စနစ် ဖြစ်တည်မှုရယ် တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဂျော့အိုဝဲ မှန်ပါတယ်လေ။ တိုင်းပြည်တွင်းက လူတွေကို ဘရိန်းမ၀ပ်ဘဲ အဲဒီတိုင်းပြည်ကို အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ အုပ်ချုပ်လို့ မရပါဘူး။
ဘာသာပြန် စာရေးဆရာမ ဝင့်ပြုံးမြင့် ဘာသာပြန်ပေးထားသော ‘လူလည်းတထွေ ရေလည်းတခြား’ဆိုသည့် စာအုပ်သည်
”အမေရိကန်အမျိုးသမီးတဦးနှင့် ငါးနှစ်အရွယ်သမီးငယ်ကလေးတဦးတို့၏ သွေးပျက်ခဲ့ရာ ငရဲခန်းအတွေ့အကြုံ” ဖြစ်သည့်အပြင် ၊
”မစဉ်းစားမဆင်ခြင်ဘဲ အိမ်ထောင်ဘက်ကို ဟင်းရွက် ကန်စွန်းရွက် ခူးသလို ဆွတ်ယူမိသော အမျိုးသမီးတယောက်၏ မဟာအမှား”အကြောင်းလည်း ဖြစ်သည်။
”ဆိုးရွားပက်စက်သည့် မာယာထောင်ချောက်ထဲ တွင်းဆုံးထိ ကျခဲ့ရပြီးမှ နောင်တများစွာ၊ နာကျင်မှုများစွာ၊ သွေးရူးသွေးတန်း မျှော်လင့်ချက် များစွာတို့ဖြင့် လွတ်မြောက်ဖို့ ကြိုးစားရသည့်
သမီးတကောင်ပိုက်လျက်က ကျားနာမတကောင်လို ကျားကုတ်ကျားခဲ ကြိုးစားခဲ့ရသည့် သင်ခန်းစာ”လည်း ဖြစ်နေပြန်သည်။
အမေရိကနိုင်ငံသူ ‘BETTY MOHMOODY’ကို (အမေရိကနိုင်ငံသားအဖြစ် ခံယူတော့မလိုလို ဟန်ပြနေခဲ့သော)’မာမွတ်ဒီ’ဆိုသူက ဇနီးမယားအဖြစ် ရယူခဲ့ပြီး သမီးငယ်လေး
‘မာထော့ဘ်’ ငါးနှစ်ပြည့်လုနီးပါးအချိန်ကျမှ မာမွတ်ဒီ၏ ‘မွတ်’ဆွေမျိုးမိဘများရှိရာ ‘မွတ်တိုင်းပြည်- အီရန်’သို့ ၂ပတ်တာမျှ အလည်အပတ်သွားမည်ဟု ခေါ်ရာက ပြဿနာအစပြုသည်။
လင်ယောက်ျားဖြစ်သူက ”အီရန်ထဲမှာ အပြီးခေါ်မထားပါဘူး”ဆိုသည့် ကတိကို ကိုရမ်ကျမ်း ကိုင်ပြီး ပေးခဲ့တာကြောင့် ဆွေပြမျိုးပြ ခဏခရီးစဉ်ဟုသာ ယုံစားပြီး လိုက်လာမိသည့်
အမေရိကန်သားအမိအတွက် ထိုခရီးစဉ်သည် ကြိုတင်ကြံစည်ပြီး ပြန်မလွှတ်တော့မည့် ”အတုတ်အနှောင် မွတ်ဇာတ်သွင်း ခရီးစဉ်”သာ ဖြစ်နေမှန်း နှောင်းခါမှ သိသွားရသောအခါ…
ထို အမေရိကန် သားအမိ အစွန်းရောက်ဘာသာရေးမှိုင်းတိုက်မှုဘေးနှင့် အသက်ဘေးကြီးထဲမှ လွတ်မြောက်ဖို့ ကြိုးစားရာတွင် အောင်မြင်မည်လား… ကျရှုံးမည်လား… ဆိုသည်ကို
ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ ရေးသားသူ Betty Mahmoody ၏ Not without my daughter စာအုပ်ကို ဘာသာပြန်သူ ဝင့်ပြုံးမြင့်က လူလည်းတထွေ ရေလည်းတခြားဟု အမည်ပေးထားပြီး
စက်တင်ဘာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ လောကသစ်စာပေမှ တန်ဖိုး ၄၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် ထုတ်ဝေထားပါသဖြင့် ဝယ်ယူဖတ်ရှုနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း ။
သတင်းစာအတွက် စာညွှန်း ထည့်မယ်ဆိုရင် အဲ့လောက်နဲ့ ရပါပြီ။ စာကို ချုံ့ထားတယ်ဆိုပါတော့။
မွတ်ဇာတ်ပဲ သွင်းသွင်း ဖွတ်ဇာတ်ပဲသွင်းသွင်း
ခုလို ဖတ်ရတော့ ကျက်သီးမွေးညင်းတောင်
ဟလူး ဟလူး ဟလူး
ဒူလာကောင်းတယ် ဆိုတာ ဘယ်လို ကောင်းတာလဲ နဲ့….
ဘယ်လိုဘယ်နည်းနဲ့ ဆေးဖော်မယ် ဆိုတာကို အလင်း ပြ ပါအုန်း
ငါဆို ဆက်မဖတ်နိုင်ဘူးလေ.. အရမ်းကို မွန်းကျပ်လာတာ… စာဖတ်ရင် ဇာတ်ကောင်က ကိုယ်ဖြစ်သွားတတ်တော့… ကိုယ်တိုင် ဘက်တီဖြစ်သွားတယ်… စာဖတ်နေရင်း အရမ်းမောလာလို့.. ရပ်ထားတယ်..
အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးတာဆိုတာထက် … လေ့လာမှုအားနည်းသွားတယ် ဆိုရမလား.. အချစ်စိတ်ကြောင့် အယုံလွယ်တယ် ဆိုရမလား… ဒီခေတ်ထဲမှာ ဒါမျိုးတွေ ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာ သတိထားမိသွားတယ်…
ကျနော်ကတော့… စာအုပ် တစ်ဝက် အကျော်လည်း ရောက်ရော…
စားလည်း ဒီစိတ်…သွားလည်း ဒီစိတ်နဲ့… ဒီသားအမိ အန္တရာယ်က လွတ်ပါ့မလားဆိုပြီး…
စာအုပ်ကို လက်က မချပဲ….တစ်မိနစ် အားရင် တစ်မိနစ်… ရအောင် ဖတ်ယူတာ… ။
အလုပ် မအားတဲ့ ကြားက …ဖတ်ပြီး..တော်တော် တွေးတောခံစားမိသွားတဲ့ စာအုပ်ပဲ… ။
ပြုံး ရဲ့ လက်ရာ က အမြဲစွဲဆောင်မှု အပြည့်ရှိနေမှာ ကို ယုံပါတယ်။
ဆက်ဆက် ရေးတာ ဖတ်ပြီး မဆိုင်တာ ကို ဆိုင်သလို တွေးမိနေတယ်။
တစ်နေ့ က သင်္ကြန်ပွဲ ကို သွားတော့ အသိ မိန်းကလေး တစ်ယောက် က သူ့ညီမလေး နဲ့ ရောက်လာတယ်။
သူ့ယောကျာင်္း က ဂျာမဏီကို သွားနေရလို့ မပါဘူး။
အဲဒီ မိန်းကလေး နှစ်ယောက်လုံး က မြန်မာဝတ်စုံ လေး တွေ အကျအန ဝတ်လို့ လာတာ။
ဒါဆန်းလား လို့ တွေးမိတယ်လား။
မြန်မာ မဟုတ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်မ ခရစ်ယာန်လေး တွေ က သူ့ ယောကျာင်္း ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ပွဲ ကို လာခဲ့တာ ဆိုရင် ဆန်းလား။
ပို ဆန်းတာ က အင်မတန် ဘာသာရေး ကိုင်းရှိုင်းတယ်လို့ ပြောတဲ့ သူ့ ယောကျာင်္း ရဲ့ အမေ က သူ့ ကို သမီး လို့ အသိအမှတ်မပြုဖူး တဲ့။
မြန်မာပြည် ကို ခေါ်မလာရတဲ့။
သူတို့ မင်္ဂလာဆောင် ကိုဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ လုပ်တော့ ဘုန်းကြီး ကို အသေအချာဝတ်ပြု နေတဲ့ “အဲဒီ မိန်းကလေး ရဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာ ကို သက်ဝင်ယုံကြည်သူ မိဘ နှစ်ပါး” ကို ကိုယ့် ဘာသာဝင် တွေ တစ်ချို့ ရဲ့ မရင့်ကျက်မှု အတွက် အားနာလိုက်တာ။
(ကိုယ့် ဘာသာဝင် တွေ တစ်ချို့ ရဲ့ မရင့်ကျက်မှု အတွက် အားနာလိုက်တာ။)
ကိုယ်တိုင်လည်း လူမျိုး ဘာသာ တခုချင်းအပေါ်မှာ တန်းတူသဘောထားရမယ်ဆိုတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ရင့်ကျက်မှုဆိုတာ ဘာမှန်းတောင် မသိခဲ့တာ။
ဒီရွာထဲရောက်မှ ရေးတေးတေးရှိလာလို့ ကျေးဇူးတင်ရသေးတယ်။
များအားဖြင့် အနောက်နိုင်ငံကို ပြောင်းလာသူ မာမွတ်တို့ အဖြစ်များတယ် ၉၉% ရှိလေမလားဘဲ။ မိဘတွေပြောင်းရွှေ့လာ.. တချို့လည်း ဒီရောက်မှ အိမ်ထောင်ကျခလေးမွေး.. သမီးမိန်းခလေးဖြစ်တဲ့အခါ ဘာသာရေးအရလည်း ရန်သူဖြစ်တော့ ပိုဆိုးတယ်။ အပျိုဖော်ဝင်တာနဲ့ ကျောင်းပိတ်ချိန် အိမ်အလည်ပြန်မည်ဆို နိုင်ငံရင်းခေါ်သွား ဟိုရောက်တော့ ယောက်ျားပေးစားရော။ ဒါကြောင့် အနောက်နိုင်ငံအစိုးရတွေက ဥပဒေထုတ်ပြီး တားမြစ်ရတယ်။ မိဘတွေ ကိုယ့်ခလေး ကိုယ်မပိုင် နိုင်ငံတော် ပိုင်တယ်ဆိုပြီး။ မာမွတ်တို့ကလည်း တနေ့ ငါးကြိမ်သာ ဖင်ပူးတောင်းထောင် ရှိခိုးတာ.. ဒါမျိုးဆို သိပ်ကြိုက်..
ဖြစ်စဉ် အကြောင်းအရာအသားပေးပြီး ရသ အရေးအသားပိုင်းနဲနဲလျော့ထားတာလား မဝင့်
ဟုတ်ပါ့ ဝေါင်းရေ ။ အမ ပင်ကိုက အပျော့ရေးတာပါ။ အနုအရွမှာပဲ ကောင်းတာ။ အခုဟာက အသွက်။ တကယ်လို့သာ ဒီစာအုပ်ကို ဆရာသင့်လူ တို့ပြန်ရင် ပိုကောင်းမှာ။ သူတို့က အမာရေးတာ။
အသွက်ရေးထားတော့လဲ ဘက်တီနေရာကိုယ်ရောက်နေသလို ရင်တမမနဲ့ပါ
ဒါပေမဲ့ မဝင့် ဒီ့ထက်ပိုလုပ်နိုင်တယ် ထင်နေလို့ပါ စိတ်မဆိုးနဲ့နော်
ဆိုးပါဘူး။ အားပေးလို့ ၀မ်းတောင်သာသေး။
ဒါဆိုရင်တော့ မနောလည်း သမီးလေး ကြီးရင် ပေးဖတ်ဖို့ ခုထဲက ၀ယ်သိမ်းထားဦးမှနဲ့တူတယ်။
ဖတ်ဖို့ကြိုးစားနေတုန်းပါ တကယ်ပြောရရင် မဖတ်ရသေးဘူး။
ဟင့်… တားတော့ ဒိတ်အောက်ပါပြီ… ဖတ်ရသေးဘူး…
ကရေမြေ့သနင်းအကောင့်က update ဖြစ်သွားပါပေါ့လား